Fabricated City (2017) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားလေးက K2 မငျးသားလေးရဲ့ ၂၀၁၇ ထှကျ Action ဇာတျကားလေးပါ၊ဇာတျလမျးမှာ Ji Chang Wook က နိုငျငံလကျရှေးစငျ တိုကျကှမျဒိုအားကစားသမားဟောငျးတဈဦးရနျငွိုးရနျစ မရှိတဲ့ အငျတာနကျဂိမျးကို အစှဲအလနျးကွီးတဲ့လူငယျလေးတဈဦးပါ။
ဂိမျးထဲမှာတော့ သူက ကှနျမိုဒိုခေါငျးဆောငျ ကပ်ပတိနျတဈယောကျပါ။တဈနတေ့ော့ ဂိမျးဆိုငျမှာ ကနျြခဲ့တဲ့ လကျကိုငျဖုနျးလေး သှားပွနျပေးခဲ့တယျ။သူဖုနျးသှားပွနျပေးခဲ့တဲ့ ကောငျမလေးက မုဒိမျးကငျြ့ပွီး အသတျခံရတဲ့အမှုမှာ သူ တရားခံဖွဈသှားတယျ။
မှုခငျးဆေးပညာအရ စဈဆေးထားတဲ့ရလဒျတှအေရ DNAရော လကျဗှရော အားလုံးဟာသူဘာမှမလုပျရဘဲနဲ့ကို မငွငျးနိုငျလောကျအောငျကို သကျသတှေကေ ပွညျ့စုံနလေရေဲ့။“အစားမတျောတဈလုတျ အသှားမတျော တဈလှမျး” ဆိုသလိုလဲ မငျးသားလေး ရတေိမျနဈပွီးထောငျနနျးတဈသကျတဈကြှနျး ကခြံဖို့ အပွဈပေးခံရလိုကျရတယျ။
မငျးသားလေး အမကေလညျး ဒီအမှုကနလှေတျအောငျ အပွငျကနေ အမြိုးမြိုးကွိုးစားပေးနရှောတယျ။ဒီအမှုကို သူ့အမေ အယူခံဝငျနိုငျတဲ့အခါ သူ မကြူးလှနျထားတဲ့အမှုကနလှေတျဖို့ထောငျထဲမှာ ခကျခဲပငျပနျးစှာ ရုနျးကနျနရေငျးက သူ့အမလေညျး ရုတျတရကျ ကှယျလှနျသှားတာကိုထောငျထဲကနေ သိလိုကျရတဲ့အခါမှာတော့…………….. •
ဘယျလိုလူတှကေမြား ဘာကွောငျ့ ရနျငွိုးရနျစမရှိဘဲဒီလို အကှကျကကြ အမှုဆငျပွီး သကျသအေပွညျ့အစုံနဲ့ ထောငျကအြောငျ လုပျခဲ့ရတာလဲ……. မှုခငျးဆေးပညာဆိုငျရာစဈဆေးခကျြ ဆိုတာ နိုငျငံ့တကာမှာသိပ်ပံနညျးကြ မှုခငျးဖျောထုတျတဲ့နရောမှာ မရှိမဖွဈကို အရေးပါအရာရောကျတဲ့ ပညာရပျပါ။
ဒီပညာရပျမှာ အငွငျးပှါးစရာကိစ်စရပျတှရှေိနပေမေယျ့ အားကိုးယုံကွညျနရေတဲ့ပညာရပျပါ။ဒီဇာတျကားမှာ ဒီမှုခငျးဆေးပညာရပျကိုဘယျလိုနညျးပညာတှနေဲ့ ပွောငျပွောငျတငျးတငျး စိနျချေါထားလညျးဆိုတာကိုလညျး တှမွေ့ငျရမှာပါ။ဒီလို စိနျချေါနိုငျဖို့ဆိုတာကလညျး Computer Hacking နညျးပညာနဲ့Computer နညျးပညာရပျတှဟောလညျး မပါမဖွဈပါဘဲ။
ဘယျလို Hacker သမားတှေ ဘယျလိုနညျးပညာနဲ့မြား အကှကျဆငျနိုငျတာလဲ………… မငျးသားလေးကရော ထောငျကနြပွေီး ဘယျသူကမှနျးမသိ ဘာကွောငျ့မှနျးမသိတဲ့ဒီလောကျသကျသတှေေ ပွညျ့စုံနတေဲ့ အမှုက ထောငျထဲရောကျနပွေီးတဲ့အခြိနျမှာကောရုနျးထှကျလို့ ရနိုငျပါဦးမလား။
ဒီလို အခကျြကကြ အကှကျဆငျတဲ့သူတှကေို ဘယျလိုမြား ဖျောထုတျကွရမှာလဲဆိုတာကိုဇာတျကားကိုကွညျ့ရငျး ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားလိုကျကွရအောငျ……….ရှညျရှညျဝေးဝေးပွောမနတေော့ပါဘူး CSI လို မှုခငျးစုံစမျးတဲ့ဇာတျလမျးမြိုးကွိုကျရငျ ဒီကားကိုကွညျ့ပါ။
Fast and Furious လို Action ဇာတျကားမြိုးကွိုကျရငျလမျး ဒီကားကိုကွညျ့ပါစဈကားတှေ ကွိုကျတတျရငျလညျး ဒီဇာတျကားကိုကွညျ့ပါ။
ဒီဇာတ်ကားလေးက K2 မင်းသားလေးရဲ့ ၂၀၁၇ ထွက် Action ဇာတ်ကားလေးပါ၊ဇာတ်လမ်းမှာ Ji Chang Wook က နိုင်ငံလက်ရွေးစင် တိုက်ကွမ်ဒိုအားကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးရန်ငြိုးရန်စ မရှိတဲ့ အင်တာနက်ဂိမ်းကို အစွဲအလန်းကြီးတဲ့လူငယ်လေးတစ်ဦးပါ။
ဂိမ်းထဲမှာတော့ သူက ကွန်မိုဒိုခေါင်းဆောင် ကပ္ပတိန်တစ်ယောက်ပါ။တစ်နေ့တော့ ဂိမ်းဆိုင်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းလေး သွားပြန်ပေးခဲ့တယ်။သူဖုန်းသွားပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးက မုဒိမ်းကျင့်ပြီး အသတ်ခံရတဲ့အမှုမှာ သူ တရားခံဖြစ်သွားတယ်။
မှုခင်းဆေးပညာအရ စစ်ဆေးထားတဲ့ရလဒ်တွေအရ DNAရော လက်ဗွေရာ အားလုံးဟာသူဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ကို မငြင်းနိုင်လောက်အောင်ကို သက်သေတွေက ပြည့်စုံနေလေရဲ့။“အစားမတော်တစ်လုတ် အသွားမတော် တစ်လှမ်း” ဆိုသလိုလဲ မင်းသားလေး ရေတိမ်နစ်ပြီးထောင်နန်းတစ်သက်တစ်ကျွန်း ကျခံဖို့ အပြစ်ပေးခံရလိုက်ရတယ်။
မင်းသားလေး အမေကလည်း ဒီအမှုကနေလွတ်အောင် အပြင်ကနေ အမျိုးမျိုးကြိုးစားပေးနေရှာတယ်။ဒီအမှုကို သူ့အမေ အယူခံဝင်နိုင်တဲ့အခါ သူ မကျူးလွန်ထားတဲ့အမှုကနေလွတ်ဖို့ထောင်ထဲမှာ ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ ရုန်းကန်နေရင်းက သူ့အမေလည်း ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားတာကိုထောင်ထဲကနေ သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့…………….. •
ဘယ်လိုလူတွေကများ ဘာကြောင့် ရန်ငြိုးရန်စမရှိဘဲဒီလို အကွက်ကျကျ အမှုဆင်ပြီး သက်သေအပြည့်အစုံနဲ့ ထောင်ကျအောင် လုပ်ခဲ့ရတာလဲ……. မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာစစ်ဆေးချက် ဆိုတာ နိုင်ငံ့တကာမှာသိပ္ပံနည်းကျ မှုခင်းဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာ မရှိမဖြစ်ကို အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ပညာရပ်ပါ။
ဒီပညာရပ်မှာ အငြင်းပွါးစရာကိစ္စရပ်တွေရှိနေပေမယ့် အားကိုးယုံကြည်နေရတဲ့ပညာရပ်ပါ။ဒီဇာတ်ကားမှာ ဒီမှုခင်းဆေးပညာရပ်ကိုဘယ်လိုနည်းပညာတွေနဲ့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စိန်ခေါ်ထားလည်းဆိုတာကိုလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ဒီလို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်း Computer Hacking နည်းပညာနဲ့Computer နည်းပညာရပ်တွေဟာလည်း မပါမဖြစ်ပါဘဲ။
ဘယ်လို Hacker သမားတွေ ဘယ်လိုနည်းပညာနဲ့များ အကွက်ဆင်နိုင်တာလဲ………… မင်းသားလေးကရော ထောင်ကျနေပြီး ဘယ်သူကမှန်းမသိ ဘာကြောင့်မှန်းမသိတဲ့ဒီလောက်သက်သေတွေ ပြည့်စုံနေတဲ့ အမှုက ထောင်ထဲရောက်နေပြီးတဲ့အချိန်မှာကောရုန်းထွက်လို့ ရနိုင်ပါဦးမလား။
ဒီလို အချက်ကျကျ အကွက်ဆင်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုများ ဖော်ထုတ်ကြရမှာလဲဆိုတာကိုဇာတ်ကားကိုကြည့်ရင်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလိုက်ကြရအောင်……….ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောမနေတော့ပါဘူး CSI လို မှုခင်းစုံစမ်းတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးကြိုက်ရင် ဒီကားကိုကြည့်ပါ။
Fast and Furious လို Action ဇာတ်ကားမျိုးကြိုက်ရင်လမ်း ဒီကားကိုကြည့်ပါစစ်ကားတွေ ကြိုက်တတ်ရင်လည်း ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ပါ။